Ugu yaraan shan qof oo lagu dilay dagaal wali ka socda magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan shan qof oo lagu dilay dagaal wali ka socda magaalada Gaalkacyo
Ugu yaraan shan qof oo lagu dilay dagaal wali ka socda magaalada Gaalkacyo
October 24, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Dagaalka oo wali ka socda duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof, oo u badan askarta iska soo horjeeda, ayaa lagu dilay in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka socda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug, sida ay sheegeen ilo-wareedyo caafimaad.
Dagaalka ayaa bilaabmay kadib markii maleeshiyada Galmudug ay weerar kusoo qaadeen saldhig milatari oo ay leeyihiin ciidamada Puntland oo kuyaala duleedka koonfureed ee magaalada, sida ay sheegeen saraakiil dhanka amaanka ah oo maxali ah.
Qiyaasta khasaaraha tirada dhimashada ayaa kala duwan, balse ilo-wareedyada intooda badan waxay dhigayaan in tirada ay ka sarayso 5, halka kuwana sheegayaan in ay ka badantahay 10.
Ma jiraan jawaabo kasoo baxay Puntland iyo Galmudug ilaa iyo hadda.
Dhanka kale, Raysulwasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ugu baqaay dhinacyada in ay joojiyaan dagaalka Gaalkacyo. Horey, Sharmaake ayaa ugu fashilmay in uu dhex-dhexaadiyo labada dhinac ee Soomaalida ah kadib markii maleeshiyada Galmudug ay diiday in ay joojiyaan dagaalka ku dhufoo ka dhaqaaqa ah ee ay ku qaadayaan ciidamada Puntland ee ku sugan duleedka koonfureed ee magaalada.
Ku dhawaad 50,000, oo dadka deegaanka magaalada ah ayaa ka cararay guryahoodii ilaa iyo inta uu qarxay colaada Gaalkacyo bishii Oktoobar ee sanadkan, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
October 12, 2016 Labo kamid ah ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya oo isku soo dhiibay Puntland
October 28, 2017 Ciidamada PSF iyo PMPF oo shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab ku qabtay buuraha Galgala
November 29, 2016 Ugu yaraan labo askari oo ciidamada Puntland ah oo ku dhimatay qarax miinada dhulka lagu aaso ah oo ka dhacay buuraha Galgala
March 8, 2017 Ciidamo gadoodsan oo la wareegay kantaroolka koonfureed ee magaalada Garoowe
At least five killed in ongoing fighting in Galkayo town
Madaxweynaha Puntland: Cadaado kaliya maahan, meesha laga soo duulay waa Xamar
Dagaalyahanada Al-Shabaab oo deegaanka Goof Guduud kala wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa maanta oo Khamiis ah kala wareegay deegaanka Goof Guduud ciidamada dowladda Soomaaliya, kadib dagaal culus oo dhexmaray labada dhinac, sida ay ilo-wareedyadu sheegayaan. Ugu yaraan todobo qof oo katirsan dhinacyadii [...]
Puntland oo u diyaargaroobaysa dabaaldega sanadgeeradeeda 21-aad
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa isku diyaarinaysa dabaaldega sanadgeeradeeda 21-aad ee asaaska dowladnimadeeda oo ku beegan 1-da Agoosto. Garoowe oo ah caasimada Puntland ayaa waxaa ka socda diyaargaroowga ugu balaaran iyadoo labo beri ay ka harsanyihiin [...]